E-Journal: thought from some words (4)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 1:50 AM
စာတော့ မရေးဖြစ်တာကြာပြီ ....
နီးဆက်ရာ စာတွေကတော့ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ကြံဖန် ပြီးပေါ့။
ကိုသု့ ပြောသလိုပါပဲ ....
ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ကို ပြန်မကြည့်မိရင် ....
တချုို့ ပုစ်ဆာတွေက အဖြေရှာလို့ မရတတ်ဘူး။
ကိုသု့ကျေးဇူးနဲ့ သိခဲ့တာလေးတွေ ပိုခိုင်မာသွားတယ်။
အားလုံးကို ကျေးဇူး ....
"Who looks outside, Dreams. Who looks inside, Awakes. "
အထက်ပါ စကားလေးကတော့ ၀ိပဿနာ ရှုမှတ်ရာ မှာ အသုံးပြုတဲ့ စကားလေးကို လက်တွေ့ဘ၀မှာ ယူပြီးသုံးနှုန်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုတာ ကတော့ အာရုံပါပဲ..အတွင်းဘက်ဆိုတာကတော့ မိမိရဲ့ ခန္ဓာငါးပါးပါပဲ..။
အာရုံ ဆိုးကောင်းနဲ့ ထိတွေ့မှု ကြောင့် ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ် ဝေဒနာ သညာ သင်္ခါရာ ရုပ် အမျိုးမျိုးကို ကုသိုလ်ချည်းပဲဖြစ်အောင် နှလုံးသွင်းရှူမှတ်နိုင်မှု သဘောကတော့ အတွင်းကိုပြန်လှည့်ကြည့်တာပါပဲ..။
(တနည်း.. အာရုံဆိုးကောင်းနဲ့ ကြုံရသမျှမှာ.. မိမိ သန္တန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကုသိုလ်စိတ်တွေကို ဖယ်ရှား မဖြစ်သေးတဲ့ အကုသိုလ်စိတ်တွေကို တားမြစ်.. ဖြစ်ပြီးသား ကုသိုလ်စိတ်တွေကို တိုးပွား.. မဖြစ်သေးတဲ့ ကုသိုလ်စိတ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း)
ဆိုတဲ့ အနက်ကို ရမယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆပါကြောင်း...
အပြင်ကိုကြည့်တယ်ဆိုတာကတော့ အာရုံ ဆိုးကောင်းကို မရှုမှတ်နိုင်တဲ့ အခါမှာ စိတ်တိုစရာတွေ့ရင် တို.. ၀မ်းသာစရာ တွေ့ ၀မ်းသာမယ်.. အညီအမျှ သဘောမထားနိုင်တဲ့ အတွက်..အိပ်မက်သလိုပဲ လို့ရည်ပြီး ဆိုထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
ပိုစ့်လေးကိုကော ဆရာတော် သူမြတ်ကိုကော လေးစားကြည်ညိုတဲ့ အတွက် လေးစားစွာပဲ သုံးသပ်ခဲ့ပါကြောင်း.....
ငယ်ငယ် အထက်တန်းကျောင်းမှာတုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့
ပီမိုးနင်းရဲ့ "အဖိုးတန်ဆုံးသောအရင်းအနှီး" ဆိုတဲ့
"ကုန်ဆုံးသွားသောအချိန်တွေဟာ ပြန်ရရိုးထုံးစံမရှိ" တဲ့။
"အချိန်ဟာ ပုလဲလုံး ပတမြားလုံးလေးတွေလို တန်ဖိုးရှိတယ်"တဲ့။
ဒါကြောင့် လက်ရှိအချိန်လေးတွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုတတ်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်။
“ငါ”ဘာလဲဆိုတာကို အရင်သိအောင် လုပ်နိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါကြောင်းလည်း ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်စစ်နေတတ်သူတွေဟာ နိုးကြားနေသူတွေ၊ ဖမ်းဆုပ်နိုင်သူတွေ ဖြစ်နေတာပါပဲ။